Nanintona ny mpankafy TIC avy any amin’ny faritra ny Barcamp tao Phnom Penh · Global Voices teny Malagasy
Nanintona ny mpankafy TIC avy any amin'ny faritra ny Barcamp tao Phnom Penh
Voadika ny 13 Oktobra 2009 20:23 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, বাংলা, English
Nanomanana Barcamp fanao isan-taona tao amin'ny Anjerimanontolon'i Paññasastra ao Kambôdja tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Ireo nisoratra anarana hanatontosa ny Barcamp Phnom Penh Barcamp. Ity no taona faharoa nanatontosana Barcamp tao Phnom Penh. Efa nanao vovonana ny mpamaham-bolongana Kambôjiana tamin'ny 2007.
Tsy misy lisitry ny handray fitenenana, na manampahefana hikabary, amin'izany Barcamp izany. Afa-miteny avokoa izay manatrika barcamp rehetra.
Mpanatrika Barcamp mieritreritra izay lohahevitra hataony.
Ny hany ataonao dia ny mametaka lohahevitrao eo amin'ny solaitraben'ny [fafana] fandaharam-potoana sy ny manangona olona maromaro handray anjara amin'ny anjara fotoananao.
Ireo handray fitenenana eo ampikarakarana ny halahany rehefa nametraka ny lohahevitra hodinihiny eo amin'ny solaitrabe.
Mihamalaza tahaka ny any amin'ny faritra hafa ihany koa izany Barcamp izany any Azia Atsimo Atsinanana. Manintsona ny olona ny hetsika tsy misy antanatohatra, ary asaina avokoa ny rehetra hizara ny fahalalany.
Ireo mpandray anjara mijery izay lohahevitra hatrehiny.
Kambôjiana eo ampanolorana fifampizarana tsara fehy.
Sajal avy any Thailand miresaka ny fanatsarana atao amin'ny vohikala vaovao mba ho mora hita kokoa ao amin'ny Google.
Fotoana amin'ny teny Khmer
Fahamaroan'isan'ny vahiny ivelan'ny firenena be indrindra nanatrika ny barcamp tao Phnom Penh.
Navitrika dia navitrika tamin'ny fitadiavana namana hiray donak'afo aminy tamin'ny alalan'ny aterineto ny mpamaham-bolongna sy ny mpiasan'ny teknolojia Kambojiana. Tsy miambàkavaka amin'ny teny anglisy ny tanora Kambôjiana ary mampiasa matetika amin'ny teny anglisy, izany no ahazoany olona maro kokoa avy any amin'ny firenenkafa.
Maro tokoa ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana any Kambodja no mitrandraka ny fomba fampiasana ny aterineto sy ny teknolojia amin'ny fampandrosoana sy ny fahasalamana. Fotoana nanararaotana ny hijerena ny asan'izy ireny ny Barcamp any Kambodja.
Mitsiky eo anelanela'ny takelaka dokambarotra i Pagna angasy nananana sy vy nahitana tamin'ny fanatontosana ny Barcamp tao Phnom Penh.
Ny tena mampiavaka ny fihetsiketsehana miresaka teknika any Kambodja dia ny fahamaroan'isan'ny vehivavy mpandray anjara. Tsy vitan'ny mandray anjara tsotra fotsiny izy ireo fa mikarakara sy manolotra lohahevitra ihany koa.
Thomas, mpamaham-bolongana sy mpandray feo avy any Alemaina, miresaka momba ny MindMapping [manao endrika an-tsarintany ny eritreritra?]. Tsy mianona amin'ny resaka teknolojia ihany ny fandaharam-potoana. Eo ihany koa ireo miresaka ny fanolorantena, serasera sosialy, fanabeazana ary ny lalao.
Ny mpanatrika Thai-Japoney 31o5 miresaka momba ny tetika [systeme] iray ahafahan'ny tsirairay mampiditra ny nofinofiny sy manadihady azy ireny [na mametraka ny nofiny sy mandinika izay lazainy].
Ny mpandray anjara Vietnamiana Hung miresaka ny momba ny serasera sosialy any Vietnam
Tamin'ny fomba ahoana moa no nahazoan'i Kambodja olona avy amin'ny firenena manodidina hanatrika ny fotoana? Ankoatra ny fahaiza-manaon'ny tanora, dia singa iray lehibe ihany koa ny fitomboan'ny tetibola ho an'ny fifamoioizana an-habakabaka izay mahatonga ny fivezivezena ho mora. Be ihany koa ny hofantrano [na hofana trano fandraisam-bahiny] any Kambodja. Samy mandoa ny laniny amin'ny diany sy ny fivahiniany ny tsirairay, izany toe-javatra ara-toe-karena izany no mampazoto ny olona ho any.
Mpikarakara sasany eo ampialana sasatra vetivety. Araka ny hitanao dia tanora Kambojiana tia ny haitao ny akamaroan'izy ireo. Eo ampitondrana ny revolisiona [sy politika] teknolojika sy fampahalalam-baovao tokoa ny tanora any Kambodja ary mavitrika amin'ny fampiasana Facebook, Twitter ary ny fitaovan'ny bolongana.
Pagna (Kambojiana) miresaka amin'i SK (Thailandey) amin'ny antony mahatonga ny tanora Kambojiana ho mailaka kokoa noho ny Thailandey. Efa hatramin'ny taona maro ny tany Thailand no efa vita amin'ny tenindreniny ny fanovozam-pahalalana resaka solosaina. Ny ankamaroan'ny Kambojiana kosa indray dia tamin'ny teny anglisy no nanaovany dingana voalohany ny fahalalana sy ny fampiasana ny solosaina.
Manana olam-pifandraisana noho ny fiadiana ny ho tompon'ny tempoly iray i Thailand sy i Kambodja. Nahafinaritra ery ny nahita ny tanoran'ny roa tonta miara-mipetraka sy miady hevitra ary mifampianatra.
Miresaka momba ny camp teknolojika sy fampahalalam-baovao [mety hataony] any amin'ny faritra antsoina hoe Camp TIC Mekong ny mpanatrika Thailandey ary maka hevitraamin'izay atrehiny.
Tamas, mpandray anjara Hongroà-Thai miresaka momba ny fototry ny fitoriana fototry ny aterineto sy ny teknolojia.
Tapitra teo ny Barcamp Phnom Penh ary manantena ny hihaona aminao indray amin'ny herintaona.
Jereo koa: Tharum Bun's account of Barcamp Phnom Penh 2009
Misaotra, Thanks for translating Jentilisa.
14 Oktobra 2009, 01:19
Inona moa no tena votoatin’io Barcamp io izay feno tanora tokoa no hita ao azafady.
16 Avrily 2010, 10:16
Ny tena mba tian’io Barcamp io zany dia ny mba hifandraisan’ny tanora sy ny fomba fiarahana eo @fomba fijery @ lafiny rehetra
20 Avrily 2010, 06:11
Fihaonana imaso manana lohahevitra malalaka izy io. ny fifankahitana no tena zavadehibe ihany koa
16 Avrily 2010, 15:57
Tsara tokoa ny anaovana fihaonana mba hifankahitana imaso sy mba hikorana
20 Avrily 2010, 06:01
Fa isakin’ny inona kay ny fihaonana fa tsy mbola fantatro,satria izao vao mba tafiditra @ity Barcamp ity za,dia mba azavazavao tsara ny fandehany amin’io fotoana io sy ny mety zavatra hafa atao akoatran’io fihaonana isan-taona io
20 Avrily 2010, 06:16
Io fihaonana io izany dia ifanarahana amin’ny ankapobeny. Samy manana ny azy ny isam-pirenena ny tena marina fa tsy voatery ho fotoana raikitra. Ny antsika teto Madagasikara moa dia indroa izay no nisy. Mety ho avy ihany koa ny fanintelony.
Fa dia miainga avy amin’ny sokajy samihafa hatrany fihaonana ka
20 Avrily 2010, 07:56
Raha mba mety dia mba hilazao vaovao ihany izahay @ Mail @ io Tovo Vigouroux io veloma
20 Oktobra 2010, 07:12
Tovo, miala tsiny fa tsy dia mazava tsara ilay fangatahanao. Vaovao toy ny inona moa ilay izy satria midadasika be ny sehatra eto. Ary sarotra be koa ilay hoe isaky ny misy vaovao dia handefa mail avy aty amin’ny GVO Malagasy foana.
20 Oktobra 2010, 17:04